Drafitr’i Googla hametraka Cloud any Arabia Saodita, “zavadoza” hoy ireo vondrona mpiaro zo nomerika · Global Voices teny Malagasy
Drafitr'i Googla hametraka Cloud any Arabia Saodita, “zavadoza” hoy ireo vondrona mpiaro zo nomerika
Mampanahy ny fiarovana angondrakitra amin'ny resaka zon'olombelona ao Arabia Saodita
Voadika ny 29 Janoary 2021 2:35 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, русский, Français, Español, عربي, polski, English, English
Pkantsary avy avy amin'ny lahatsary maneho toerampiasana iray an'ny Google ao anatin'ny trano fitahirizany angondrakitra.
Maminavina ny hametraka faritra Cloud Googla vaovao any Arabia Saodita ilay goavan'ny teknôlôjia, Google.
Nampitandrina ny “Access Now”, fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakàna, mpiaro ny zo nomerika, ary nitaky ny hampitsaharana avy hatrany ilay drafitra, tamin'ny fitanisàna ny “zavabita mahatsiravina momba ny zon'olombelona” tao amin'io firenena io.
Ny 26 Janoary teo, namoaka fanambaràna iray ilay fikambanana, niarahany tamin'ny “Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC)”, klinika iray ao amin'ny Anjerimanontolon'i Ottawa, sampana fianarana lalàna momba ny teknolojia ho tombontsoan'ny daholobe,.
Ilay fanambaràna dia mampitandrina manoloana ny fitsofohana “mampididoza” entin'ilay drafitr'i Google hametraka ny rakitra Snapchat ho ao amina lohamilina any Arabia Saodita, izay lazainy fa “hametraka ny torohay manokan'ireo olona an-tapitrisa mpampiasa Snapchat ho eo ambany fanapahan'ny rafi-pitsaràn'ny governemanta iray izay efa hatry ny ela no manantantara amin'ny resaka fanarahamaso.”
“Ara-tantara dia zavatra tsy afaka hifangaro mihitsy ny resaka fiantohana ny zon'olombelona sy i Arabia Saodita,” hoy ny nambaran'i Marwa Fatafta, mpiandraikitra ny politika ho an'ny faritra Afovoany-Atsinanana sy Afrika Avaratra ao amin'ny “Access Now”:
Mampididoza ny fametrahana faritra Cloud iray vaovao ao amin'io Fanjakàna io, ary tena takiana ny hitondran'ny Google fanazavàna, amin'ny fomba tsy miolanolana, ny fomba eritreretin-dry zareo hiarovana ny rakitra manokana sy ny zon'ireo olona tsy ho latsaka eo ambany mason'ireo tia tsiritsirika ao anaty fitondràna saodiàna.
Ny tarehimarika mampivarahontsana amin'ny resaka zon'olombelona ananan'ny governemanta saodiàna dia ahitàna ny fanampenam-bava ireo mpikatroka, mpiaro ny zon'olombelona sy ny zon'ny vehivavy, mpanao gazety ary fanitsakitsahana ireo zo fototra tokony ho an'ireo teratany ao aminy amin'ny alàlan'ireo famonoana tsy mandalo fitsaràna, famonjàna sy fampijaliana, ary ny fampiasàna rindrambaiko fitsikilovana hanaovana hazalambo sy sivana.
Io tantara mampikorontan-tsaina io, hoy ilay fanambaràna, dia “miteraka ahiahy fatratra momba ny mety ho fanamoràna sy fanaovana ho toy ny tsy nisy ireo fanitsakitsahana ny zon'olombelona amin'ny hoavy.”
Indrindra fa Snap, Inc., ilay orinasa renin'ny Snapchat, dia voatondro ho iray amin'ireo tena mpisehatra ao anatin'ilay tolotra vaovao Cloud hapetraka any Arabia Saodita. Raha jerena ny habetsaky ny fampiasàna io fampiasa io any amin'ny faritra, miaraka amin'ireo 17 tapitrisa mpampiasa azy, dia samy zavatra manokana mampiasa loha ny mety hisian'ny fangatahana angondrakitra na ny “meta data” ho ataon'ny governemanta — sy ny hitomboan'ny ho fahafahany manara-maso sy mifehy ireo resaka atao an-tserasera.
“Ho tandindonin-doza mivantana amin'io ireo olona an-tapitrisa, izay ny fahafatesana no mety ho vokany,” hoy i Vivek Krishnamurthy, talen'ny CIPPIC .
Tamin'ny alàlan'ny taratasy misokatra nalefa ho an'ny Tale Jeneralin'ny Google, Sundar Pichai, sy ny Tale Jeneralin'ny Snap Inc. Evan Spiegel tamin'ny Talata 26 Janoary, notakian'ny “Access Now” sy ny CIPPIC ireo orinasa roa ireo mba hibanjina andian'olana maromaro, isan'izany ny hoe nisy ve sa tsia fanaovana famotopotorana araka ny tokony ho izy, ny mety ho fiantraikany amin'ny zon'olombelona, momba ny fametrahana ilay Cloud ao amin'ny faritra sy ny fampiantranoana ny angondrakitry ny Snapchat ao Arabia Saodita; inona avy ireo fampiasa na mpanjifa hafa mampiasa io foibe io hitahirizany ny angondrakitr'izy ireo, sy ny hoe angondrakotra toy ny ahoana an'ireo mpampiasa no tazonina ao ary kiraina avy any amin'ny firenena iza, ary inona avy ireo fepetra fiarovana napetraka hiarovana io angondrakitra io?.
Ametrahan'ilay taratasy fanontaniana ihany koa ny momba ireo fenitra araka ny lalàna heverin'ny Google Cloud sy ny Snap fa ilaina hisian'ny fandraharahàna tsara antoka sy maharitra, ary izay fomba hiatrehan'ilay Fanjakàna ireny tondro ireny, fanampin'izay efa fifanarahana rehetra nifanaovan'ireo orinasa tamin'ny goernemanta saodiàna momba ny fahafahany miditra amin'ny angondrakitra.
Araka ilay fanambaràna, notakiana tamin'ireo orinasa ny hamalian-dry zareo imasom-bahoaka ireo fanontaniana ireo hatramin'ny Talata 2 Feborary ho avy izao.
Tiorkia 12 ora izay
Iràna 2 andro izay